SOMALI CURRENT AND PROPOSED ALPHABETS | Somália | Tipologia Linguística
salvarSalvar SOMALI CURRENT AND PROPOSED ALPHABETS para ler mais tarde
Civilization - Wiki
Galool Maagazine Issue February 2013
The Arab Factor in Somali History
SOMALI AKTUELLE UND VORGESCHLAGENE ALPHABETS
Vergleich zwischen der aktuellen und vorgeschlagenen Alphabet in Zahlen von einer Literatur, welche Artikel als Probe.
SAHAN Cultural Project Mobile: 00971561099566 Fax: 0097126770699 6/13/2013
AKTUELLE UND VORGESCHLAGENE ALPHABETS
Farta la adeegsado Farta la soo bandhigay
current Alphabet Suggested Alphabet Waa maxay Maansada soomaaliyeed, Ma Gabay W maxay Mnsada smliyd, Ma Gabay b baa mise waa Geeraar? mise w Grr? Marka hore, waxa aan halkan uga dirayaa hanbalyo, Mareegta Hadhwanaagnews, oo noqotay hormoodka Suugaanta. Waa hubaal in ay dadka soomaaliyeed aad u jecelyihiin Suugaanta. Inkastoo aanay suugaantu, keliya ahayn Maanso la tiriyo, ee hal-abuurka sheekadu ay ka mid tahay suugaanta, balse inta badan Maansada ayeynu la xidhiidhinnaa Suugaanta. Intaa dabadeed waxa aan aad iyo aad ugu hanbalyeynayaa dhallintii/Waayeelkii soo bandhigay Deelleydii dhowaan ka bilaabantay Hadhwanaagnews. Maalmahanna aad mooddo in ay u sii diga-roganayso Shiinley. Intaa dabadeed, aan u soo daadego dulucda qoraalkani xanbaarsanyahay. Mar haddii aanay qornayn Sugaanta soomaaliyeed, oo aan la helin qoraallo innaga haqabtira qaabdhismeedka Maansada ama guud ahaanba Suugaanta. La yaabi mayno haddii aynu kala garanweyno Gabay iyo Geeraar, Jiifto iyo Masafo. Intaynaan guda gelin kala duwanaanshaha Maansada, waa maxay Maanso, halkeebay ku aroortaa. Marka hore waxa aynu u adeegsannaa wax kasta oo leh habdhac iyo xaraf la raaco. Haddii aan halkaa ku yara hakado waxa aynu odhan karnaa Gabaygu waxa uu ka mid yahay Maansada. Sidaa darteed haddii la yidhaahdo hebel waa Maansoyahan, macnaheedu ma aha waa Gabayaa. Waxa uu noqon karaa Geeraaryahan. Is weydiintu waxa ay tahay maxaa Maanso kasta loogu magacaabaa Gabay Inta badan waxa la odhan karaa gabaygu waa Odayga Maansada. Marka hore, waxa n halkan uga diray hanbalyo, Margta Hawangnews, noqotay hormdka Sgnta. W hubl in ay dadka smliyd d u jecelyihn Sgnta. Inkast nay sgntu, keliya ahayn Mnso la tir, hal-abrka kadu ay ka mid tahay sgnta, balse inta badan Mnsada ayeynu la xii Sgnta. Int dabadd waxa n d d ugu hanbalyeynay aint/Wylk s banigay Deyd own ka bilbantay Hawangnews. Mlmahaa d mo in ay u s diga-roganayso nley. Int dabadd, n u s ddego dulucda qorlkani xanbrsanyahay. Mar ha nay qornayn Sugnta smliyd, n la helin qoro iaga haqabtira qbismdka Mnsada ama gd ahnba Sgnta. La ybi mayno ha aynu kala garanweyno Gabay Grr, Jfto Masafo. Intaynn guda gelin kala duwannaha Mnsada, w maxay Mnso, halkbay ku arrt. Marka hore waxa aynu u adgsa wax kasta leh habac xaraf la rco. Ha n halk ku yara hakado waxa aynu oan karn Gabaygu waxa ka mid yahay Mnsada. Sid dartd ha la yihdo hebel w Mnso -yahan, macnahdu ma aha w Gabay. Waxa noqon kar Grryahan. Is weydntu waxa ay tahay max Mnso kasta lgu magacb Gabay Inta badan waxa la oan kar gabaygu w Odayga Mnsada.
Bal aynu u fiirsanno Maansadan uu tiriyey Ilaahay Bal aynu u frsao Mnsadan tiriyey Ilhay
ha u naxariistee Cali Jaamac Haabiil. Markii loo ha u naxarst Cali Jmac Hbl. Mark l sheegay geeridii Xirsi. Waxa ka mid ahaa gay grid Xirsi. Waxa ka mid ah Maansadaas: Mnsads: Geeridii Xirsey sheegayeen, gacal ha waayeene Abidkii rag waa goI jiree, tanise waa gawe Gabbal baa u dumay, reerihii geliga Booc yiile Lix hal oo u wada gaar ahaa, goconayaa mooyi. Sidii tuducyadu isugu xigeen umaan qorin, waxaanse uga socdaa. Maansadaasi ma Gabay baa mise waa Geeraar. Waxa aynu si fudud u odhan karnaa waa Gabay. Waayo waxa aynu garanaynaa habdhaca Gabaygu leeyahay. Waxa kale oo jira qaabab kale oo lagu garan karo. Haddii aad u sii fiirsato waxa aad arkaysaa in Gabaygu uu leeyahay laba qaar oo siman, oo tusaale ahaan Geeridii Xirsey sheegayeen, waa qaarka hore waanaad ku nasanaysaa, markaasaad raacinaysaa Gacal ha waayeene, oo ah qaarkii danbe. Dadka aqoonta Gabayga u sii dhuundaloolaa, waxa ay u kala qaybiyaan Hoojis iyo Hoorris. Tusaalahan kale ee Gabayga ah u fiirso. Waa Gabaygii Macaan iyo Qadhaadh ee uu tiriyey, Qaasim Ilaahay naxariistii janno ha ka waraabiyee. Dacartuba mar bay malab dhashaa, muudsataa dhabaqe; Waxaan ahay macaan iyo qadhaadh, meel ku wada yaalle. Midigtaydiyo bidixdaydu waa, labo mataanoode. Midi waa martida soora iyo, maato daadihise. Midna waa middiyo xiirayiyo, mur iyo deebaaqe. Masalooyin talantaalliyaan, maandhe leeyahaye. Waxa aad garan kartaa sida ay isugu egyihiin Gabaygii hore. Marnaba ma odhan karno waa Geeraar ama waa Jiifto. Haddii aynu ku tilmaanno Gabygaas Jiifto, waxa aynu isku qiraynaa in aynaan kala garanayn Gabay iyo Jiifto. Laga soo bilaabo xilligii uu bilaabmay fanka soomaaliyeed waxa sii dhimanayey Gabaygii soomaaliyeed oo waxa suuqii Grid Xirsey gayn, gacal ha wyne Abidk rag w goI jir, tanise w gawe Gaal b u dumay, rrih geliga Bc yle Lix hal u wada gr ah, goconay myi. Sid tuducyadu isugu xign umn qorin, waxnse uga socd. Mnsadsi ma Gabay b mise w Grr. Waxa aynu si fudud u oan karn w Gabay. Wyo waxa aynu garanayn habaca Gabaygu lyahay. Waxa kale jira qbab kale lagu garan karo. Ha d u s frsato waxa d arkays in Gabaygu lyahay laba qr siman, tus le ahn Grid Xirsey gayn, w qrka hore wnd ku nasanays, marksd rcinays Gacal ha wyne, ah qrk danbe. Dadka aqnta Gabayga u s ndall, waxa ay u kala qaybiyn Hjis His. Tuslahan kale Gabayga ah u frso. W Gabayg Macn Qa tiriyey, Qsim Ilhay naxarst jao ha ka warbiy. Dacartuba mar bay malab a, mdsat abaqe; Waxn ahay macn qa, ml ku wada ye. Midigtayd bidixdaydu w, labo matnde. Midi w martida sra , mto ddihise. Midna w mi xray, mur dbqe. Masalyin talantiyn, mne lyahaye. Waxa d garan kart sida ay isugu egyihn Gabayg hore. Marnaba ma oan karno w Grr ama w Jfto. Ha aynu ku tilmo Gabygs Jfto, waxa aynu isku qirayn in aynn kala garanayn Gabay Jfto. Laga s bilbo xiig bilbmay fanka smliyd waxa s imanayey Gabayg smliyd waxa sq ka sray hsta ama hada la s
ka saaray heesta ama heellada oo la soo baxday dardar cusub. Waxa aynu odhan karnaa kontomaadkii ilaa lixdamaadkii waxa soo xoogaysanaysey heesta soomaaliyeed. Gabayguna waa uu sii daciifayey. Inkastoo la odhan karo waxa uu xoog ku lahaa dhankii halganka, waa marka aynu jalleecno Gabayadii Cabdilaahi Suldaan Timacadde, Cabdi Iidaan iyo Axmed Ismaaciil Diiriye Qaasim. Laakiin ma dafiri karno sida ay xilligaa u xoogaysatay heesta soomaaliyeed. Haddaba waa maxay Heestu? Way kala duwanaan kartaa marka Maansayahanku uu sii kala dhigdhigayo, balse waxa aynu ognahay in aan Gabaygu suuqbadan ku lahayn heesta Muusigga la saaro ee reer Magaalku dhegeysto. Sidaa darteed suuqii magaalada wuu ku dhexdhintay Gabaygii. Waxa aynu soo tilmaannay in uu Gabaygu ahaa Madaxa Maansada soomaaliyeed. Mar haddii Gabaygii sidaa noqday, waxa aan dhiman magacii Gabayga oo ilaa maanta aynu u adeegsannaa si qaldan oo tusaale ahaan Jiifto ayeynu ku sheegaynaa Gabay. baxday dardar cusub. Waxa aynu oan karn kontomdk il lixdamdk waxa s xgaysanaysey hsta smliyd. Gabayguna w s dacfayey. Inkast la oan karo waxa xg ku lah ank halganka, w marka aynu jacno Gabayad Cabdilhi Suldn Timacae, Cabdi dn Axmed Ismcl Driye Qsim. Lkn ma dafiri karno sida ay xiig u xgaysatay hsta smliyd. Haaba w maxay Hstu? Way kala duwann kart marka Mnsayahanku s kala igigayo, balse waxa aynu ognahay in n Gabaygu sqbadan ku lahayn hsta Msia la sro rr Maglku egeysto. Sid dartd sq maglada w ku exintay Gabayg. Waxa aynu s tilmay in Gabaygu ah Madaxa Mnsada smliyd. Mar ha Gabayg sid noqday, waxa n iman magac Gabayga il mnta aynu u adgsa si qaldan tusle ahn Jfto ayeynu ku gayn Gabay. Jftada laftigda ay l s kala abtiriy, wna wjib in la kala barto Mnsada smliyd qaybaha. Qasab ma aha in d tahay Mnsayahan, waxse lama fn ah in d wax ka taqo Mnsada smliyd qaybahda. Masafy maxd tahay, t n u fo Mnsayahanka smliyd, balse Grrka d l jecl ayba ka hor intay Gabayg. Grrw maxd tahay. Adign ml rba ka dnin, n s qdao Grrk cnka ah Kna sb kaa sr tiriyey Ilhay naxarst jao ha sy, Cabdilhi Suldn Timacae.
Jiiftada laftigeeda ayaa loo sii kala abtiriyaa, waana waajib in la kala barto Maansada soomaaliyeed qaybaheedda. Qasab ma aha in aad tahay Maansayahan, waxaase lama dhaafaan ah in aad wax ka taqaanno Maansada soomaaliyeed iyo qaybaheeda. Masafooy maxaad tahay, taa aan u dhaafo Maansayahanka soomaaliyeed, balse Geeraarka oo aad loo jeclaa ayaaba ka hor dhintay Gabaygii. Geeraaroow maxaad tahay. Adigoon meel dheerba ka doonin, aan soo qaadanno Geeraarkii caanka ahaa ee Kaana siib kanna saar ee uu tiriyey Ilaahay naxariistii janno ha siiyee, Cabdilaahi Ka sitan sabn Suldaan Timacadde. Calanknu sugaynaye Sahanksa ahaynw Ka siddeetan sabaan Srmaweydo hicdayow Calankaanu sugaynaye Saqexnu ahayne Sahankiisa ahaynoow K s sray cadcw. Seermaweydo hillaacdayow Saqdhexaanu ahayne Waxa d si fudud u arkays, in ismaha
Kii soo saaray cadceeddoow Waxa aad si fudud u arkaysaa, in dhismaha Maansadani ka duwantahay labadii Gabay ee hore. Marka aad codka maqlaysana waa kala jaad Gabayga iyo Geeraarku. Waa hubaal in dad badan oo aqoon dheeraad ah u leh qaybaha Maansada soomaaliyeed ay jiraan, balse aanay fursad u helin ay innoogu soo gudbiyaan. Ujeedada qoraalkani waa in ay aqoonyahannadeenna u dhuundaloola qaybaha Maansada ay inoo soo bandhigaan qaababka Maanso ee jira. Si aanay u dhicin in Gabay aynu ku sheegno Jiifto ama geeraar aynu ku tilmaanno Gabay. Maalmahan waxa ka socotay Hadhwanaagnews Silsilad Maanso oo loogu wanqalay Deelleey waxa ay u badnayd Jiifto oo gabaygu wuu ku yaraa. Haddana waxa aad arkaysay Jiifto lagu magacaabayo Gabay. Si aanay taasi u dhicin aynu kala baranno Maansada Soomaaliyeed aqoon ahaan. Inta aan ka xasuusto qaybaha Maansada soomaaliyeed waxa ka mid ah: Gabay, Geeraar, Guuroow, Saar, Masafo, Jiifto, Buraanbur iyo qaar kale oo badan. Waxa kale oo jira xaraf raaca Maansada oo aan isku mid ahayn tusaale ahaan, haddii laga Maansoodo xarafka Y waxa yaraanaya erayada la adeegsanayo. Haddii Shiinka laga Maansoodana waa ay yaraanaysaa erayada laga unki karaa. Haddii laga bilaabo Maansada xarafka D waa hubaal in laga helayo ereyada soomaaliga ereyo aad u farabadan. Sidaa darteed waa imtixaan kale oo laga rabo in uu Maansayahanku ka gudbo. Xarfaha oo la kala doortaa, waa qayb ka mid ah dhismaha Maansada iyo sida uu Maansayahanku ugu helo ereyo uu ka taxo Maansadiisa. Ugu danbayn waxa aan jeclaan lahaa in aan ku soo afmeero qoraalkan. Waar yeynaan Gabay ku sheegin Jiifto, Geeraarna yeynaan ku sheegin Gabay. Dhanka qoraalkana aad ha loo hufo oo ha la haadiyo marka la qorayo Maansada. Waxa dhici karta Maanso aad u dhismo fiican in lagu calaaliyo oo lagu dilo qoraalka. Mnsadani ka duwantahay labad Gabay hore. Marka d codka maqlaysana w kala jd Gabayga Grrku. W hubl in dad badan aqn rd ah u leh qaybaha Mnsada smliyd ay jirn, balse nay fursad u helin ay igu s gudbiyn. Ujdada qorlkani w in ay aqnyahaada u ndalla qaybaha Mnsada ay in s banign qbabka Mnso jira. Si nay u icin in Gabay aynu ku gno Jfto ama grr aynu ku tilmo Gabay. Mlmahan waxa ka socotay Hawangnews Silsilad Mnso lgu wanqalay Dy waxa ay u badnayd Jfto gabaygu w ku yar. Haana waxa d arkaysay Jfto lagu magacbayo Gabay. Si nay tsi u icin aynu kala barao Mnsada Smliyd aqn ahn. Inta n ka xassto qaybaha Mnsada smliyd waxa ka mid ah: Gabay, Grr, Grw, Sr, Masafo, Jfto, Burnbur qr kale badan. Waxa kale jira xaraf rca Mnsada n isku mid ahayn tusle ahn, ha laga Mnsdo xarafka Y waxa yarnaya erayada la adgsanayo. Ha nka laga Mnsdana w ay yarnays erayada laga unki kar. Ha laga bilbo Mnsada xarafka D w hubl in laga helayo ereyada smliga ereyo d u farabadan. Sid dartd w imtixn kale laga rabo in Mnsayahanku ka gudbo. Xarfaha la kala drt, w qayb ka mid ah ismaha Mnsada sida Mnsayahanku ugu helo ereyo ka taxo Mnsadsa. Ugu danbayn waxa n jecln lah in n ku s afmro qorlkan. Wr yeynn Gabay ku gin Jfto, Grrna yeynn ku gin Gabay. anka qorlkana d ha l hufo ha la hd marka la qorayo Mnsada. Waxa ici karta Mnso d u ismo fcan in lagu call lagu dilo qorlka. Dadkuna waxa ay ariyeyn w qorlka ma agjgo qofk tiriyey, egeysina ma aha. Sid dartd, qorlka d ha lgu frsado qofka u s gudbinaya Margaha
Dadkuna waxa ay akhriyeyaan waa qoraalka oo ma ha saxo hida, hakadka, jgsiga. agjoogo qofkii tiriyey, dhegeysina ma aha. Sidaa darteed, qoraalka aad ha loogu fiirsado oo qofka u *Ha qalad ku jio qbka aaxdayda gu soo gudbinaya Mareegaha ha saxo higgaada, s dir emailka hsta ku qoran. hakadka, joogsiga. Gacanlibaax2001@yahoo.se *Haddii uu qalad ku jirro qaabka sharraxaadayda Nabad cno iigu soo dir emailka hoosta ku qoran. Sayid Maxamed Ysuf Sweden Gacanlibaax2001@yahoo.se Nabad iyo caano Sayid Maxamed Yuusuf Sweden
Xuruufta La hab-toosiyay die modifizierten Buchstaben the modified letters kh = sh = dh = oo = uu = aa = ee = ii = iyo =
statistics Tirada Xuruufta Farta la adeegsado Anzahl der Buchstaben in der aktuellen Alphabet Number of letters in the current Alphabet Tirada Xuruufta Farta la soo bandhigay Anzahl der Buchstaben in Alphabet vorgeschlagen Number of letters in suggested Alphabet
Natiijo: Waxaan awadnaa in aan ilaashannu qiimi gaadhaysa 11,99%, oo kordhinaysa wax tarka liid iyo xaashi walba ee lagu qoro fartan la soo bandhigay.
Resultat: Wir sind in der Lage bis 11, 99% in einer solchen Probe, wodurch die Aussagekraft jeder Zeile und Seite durch die vorgeschlagene Alphabet geschrieben.
: %99,11 .
Result: We are able to save 11, 99% in such sample, increasing the informative value of each line and page written by the suggested Alphabet.
Documentos semelhantes a SOMALI CURRENT AND PROPOSED ALPHABETS